Khuphela umthombo we-IKEA okhululekileyo owakhe wawabona | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuba i-IKEA iyothusa amaxesha ngamaxesha, kungenxa yesakhono sayo sokuyila Ukophula ivili nokusizisela into eyahlukileyo. Ngeli xesha yayiyifonti yasimahla ebizwa ngokuba yiSoffa Sans onokuyiqonda ngokulula kuba lolona hlobo luchanekileyo lokuchwetheza olwakha lwenziwa.
Ifenitshala enkulu ye-IKEA isungule iSoffa Sans njengomthombo okhululekileyo kwaye oko kukhuthazwe ngabaxhasi abafanayo ababedlala ngesixhobo sakhe sokwenza iisofa. Enye yezo zimvo ziyakwazi ukwenza imeko kwaye ngokuqinisekileyo siya kuyibona kolunye uphawu olukhulu.
Kwakukho kwi Iakhawunti esemthethweni ye-IKEA ye-Twitter apho umthombo omtsha wabhengezwa khona kwaye usekwe kwisixhobo esikwi-Intanethi esibizwa ngokuba yi-IKEA I-VONANTUNA. Oku kukuvumela ukuba wenze isofa yakho yamaphupha ngokurhuqa kwaye ulahle izinto ezahlukeneyo ezenza ukuba zenze ezakho.
Siyithandile indalo yakho yokucwangcisa isofa kangangokuba baphefumlela eyona fonti intle kakhulu. Dibana neSOFFA SANS. Khuphela apha https://t.co/ZdMyFuahqM pic.twitter.com/IIHnDHWwFO
-I-IKEA UK (@IKEAUK) Juni 28, 2019
Olu luvo luvela kwinyani yokuba eso sixhobo se-intanethi sasetyenziselwa ukubhala imiyalezo, ke ezinye zeengqondo zokuyila kwi-IKEA zeza nokuyijika ibe yindawo enokukhutshelwa simahla kuluhlu lwemibala kunye nobukhulu ukusuka kwiwebhusayithi ye-IKEA.
Mkhulu, ewe? Kwaye konke kuvela gcina iingqondo zakho zivulekile xa abathengi bakho besebenzisa izixhobo ozibeka kubo. Akukho ngxelo ingcono kunye neziganeko ezingcono kunezo zinokuphuma kwabo bathengi abaza kuzisebenzisa ezo zixhobo ngeendlela ezothusayo.
Iyakwazi nayo Unxibelelwano olusebenzayo kunye nobudlelwane obukhethekileyo loo nto yenza uphawu lwakho lube lolwahlukileyo. Sele siyazi ukuba ukunyaniseka kubaluleke ngaphezu kolu lwalamano phakathi kweempawu kunye nabathengi. Umthengi onelisekileyo uya kuthengisa ngaphezulu kwawo onke amawaka eeuros ongazichitha kwintengiso. Ungaphoswa kuNowa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Ifonti yasimahla ye-IKEA lolona hlobo luhle kakhulu lokubhala olwenziweyo
Imizobo yaseKorea ifundisa inyathelo ngenyathelo indlela yokuzoba iintyatyambo ezintle